Ultra girazi skrini inodzivirira ye iphone 4s kuongorora
Kuru Nhau & Ongororo Ultra Girazi skrini inodzivirira ye iPhone 4S Ongororo
Ultra Girazi skrini inodzivirira ye iPhone 4S Ongororo
Iyo iPhone inogona kuve inodhura mari - mari inovhara iyo inogona kupwanya kuita zvidimbu nguva yekutanga iyo ruoko runosangana neiyo tile yako yako. Izvi zvinotsanangura kuti nei makambani mazhinji ari kubhadhara mari pazvinodiwa zvekuchengetedza iPhone zvishongedzo.
Nhasi tiri kuongorora imwe yakadaro. InodaidzwaUltra Girazi- a € 30 ($ 37) skrini inodzivirira yakagadzirirwa iyo iPhone 4 uye iPhone 4S. Chii chinoita kuti ive zvirinani pane kuwanda kwenzira dzakachipa, iwe unobvunza? Chekutanga pane zvese, inogadzirwa negirazi rakadzikama uye kwete kunze kwepurasitiki yakajeka, zvichireva kuti izvo zvinofanirwa kuve zvakaoma kupfuura zvimwe zvese. Muchokwadi, iyo inogadzira inoti iyo Ultra Girazi inoshanda pakurwisa kutsemuka, kuvhunduka kwakasimba, uye kukwenya, ichiri kubata kuchengetedza zvidhindo zveminwe zvisipo. Uye kana izvo zvisina kukwana, zvinowanikwa mumavara mana akasiyana kuti zvienderane zviri nani zvaunofarira - nhema, chena, violet uye nebhuruu. Zvinoita sekuvimbisa, saka regai maapos atore zvekushandisa kunze kwebhokisi uye kuti aone zita ripi raachazvigadzirira iro.
Inosanganisirwa museti ijira rekuchenesa, iro raunoshandisa kupukuta kumberi kweiyo iPhone yako usati waisa Ultra Girazi pairi. Zvino iwe unoda peya yemaoko akatsiga kuti uenzanise mudziviriri munzvimbo yayo. Hatina kukwanisa kuwana kukwana kunze kwekuyedza kwekutanga, asi sezvo tanga tisati taisa simba kumudziviriri kuitira kuti irambe yakanamatira, yakabuda zviri nyore. Isu takagutsikana kwazvo nemhedzisiro mushure mekuyedza kwechipiri - hapana mabhuru akashata ekubvisa uye hapana mhando dzeguruva rakabatwa pakati.
Pukuta kumeso kweiyo iPhone 4S uye isa Ultra Girazi neruoko rwakadzikama
Iko pamusoro peiyo Ultra Girazi iri rakatsetseka chaizvo kuti minwe yedu itedzere kushanda nesimba pairi. Nguva yose iyi, chigunwe chemunwe chakasara kumashure chakadzikira, uye nekukurumidza kupukuta kunozvibvisa zvese. Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvakajeka, saka chishandiso & apos; s inoratidzika inotaridzika sezvayinoita usati waisa mudziviriri. Pasi pechiedza chezuva, zvisinei, iyo smartphone & maapos; ekunze kuoneka kunodzikira zvishoma nekuda kwegirazi rakadzikama 'kuratidza. Chimwe chinhu chatakatarisawo aive madiki madiki akarongedzwa mugridhi inovhara dziviriro & apos; nzvimbo, zvinofungidzirwa kuti zviitise iko kwekubata sikirini & apos; s mashandiro. Sezvo ivo vachingoonekwa pane imwe kona, iwe haungave uri kuvacherekedza nguva dzese, asi vanokwanirisa vanogona kuvawana vachishungurudza.
Iyo Ultra Girazi skrini inodzivirira inobvumira generic inodzivirira kesi kuti ishandiswe
Zvino kunouya chikamu chinonakidza. Isu taida kuona kana Ultra Girazi rakaoma sekureva kunoita mugadziri, saka takaedza kurikwenya nekiyi yeimba. Hapana chakaitika. Takakwenya svosve neforogo yemanheru, asi tichitsvedza pamusoro pechiso tichishandisa kumanikidza zvine mutsindo wasn & apos; yakakwana kuita chero kukuvara. Saka hongu, Ultra Girazi inonyatsopokana nekukwaya.
Ramba uchifunga, zvisinei, kuti chishongedzo chinodzivirira chete iro kumberi divi reiyo iPhone, uye isu tine chokwadi chekuti musana wayo wakangoita seusina kusimba. Nekutenda, iwo madimikira emudziviriri anotendera kuti generic dziviriro kesi ishandiswe, kunyangwe mhedzisiro inogona kusiana nedzimwe dzechitatu-bato kesi.
Pakazara, kana iwe uine mari, iyo Ultra Girazi iPhone 4S skrini inodzivirira ndeye yakanaka mari. Iyo inokanganisa zvishoma iwo maratidziro enhare, asi mukutsinhana, iwe unowana imwe yakanaka yakasimba nhumbi dzokuratidzira kwayo. Chokwadi, isu tinoshuva kuti dai zvaigona kudzivirira kumashure kwechigadzirwa zvakare, asi sezvo vanhu vazhinji vachishandisa kesi yekudzivirira ne yavo iPhone 4 kana iPhone 4S, izvo hazvifanirwe kunge zvakanyanyisa kuita chibvumirano.
ZVIMWE:Nhasi taona kuti kuratidzwa pane yedu iPhone kwanga kusiri kunetseka sezvazvinofanira kuve. Isu takabvisa chidzitiro chekudzivirira, ndokuchidzorera. Zvese zvinhu zvanga zvadzokera pane zvakajairwa kwemaminetsi mashoma, asi pakupedzisira, iyo screen & apos; s senitivity yakadzikira zvakare. Zvinoita sekunge chinamatira hachina kunamira sezvataifunga, saka kutora chinodzivirira mushure mekuchiisa hazvikurudzirwe.
verizon data chirongwa che ipad
Deal: Samsung Galaxy S8 uye S8 + zviri $ 150 zvakachipa paGood Buy
Seidio OBEX kesi yeSamsung Samsung Cherechedzo 3 Ongororo
Pano & maapuro ekuti iwe ungaedze sei T-Mobile & apos; s isina waya network kusvika mazuva makumi matatu pasina muripo
PhoneArena 2019 Makomborero: Akanakisa Kamera Nhare
Icho chakavanzika chirevo kumashure kwemazita e tech giants: zvinorevei Samsung?
Yakanakisa mameseji mameseji mameseji eSMS ekushandisa
Apple Watch vs Moto 360 vs LG G Tarisa R vs Samsung Gear S: specs kuenzanisa